DAX - BAREA : Nosazian’ny Fifa handoa onitra sy tsy mahazo milalao efa-bolana
Nosazian’ny Fifa, tsy mahazo milalao efa-bolana Andriamirado Arohasina, fantatry ny maro amin’ny solon’anarana DAX, mpilalao ao amin’ny Barea an’i Madagasikara. 11 février 2020
Fitoriana nataon’ny Fosa Juniors no nahatonga ity fanapahan-kevitry ny Fifa ity. Tamin’ny taona 2018 izy no niala tao amin’ny Fosa Juniors Boeny, ka nifindra tany amin’ny klioban’ny Kaizer Chiefs any Afrika Atsimo. Tamin’io fifindrany voalohany io dia efa nisy savorovoro teo amin’ny ekipa nandray azy sy ny ekipa nialany (Fosa Junior) saingy noheverina ho nilamina ihany ny raharaha taorian’izay.
Lamandy mitentina 157.572.000 Ariary
Am-perim-pilalaovana ao amin’ny Black Leopards ao Afrika Atsimo izy izao nilatsahan’ny sazy izao ary efa vita "mutation" ara-dalàna. Roa taona aty aoriana nefa dia nivoaka tampoka ny didy avy amin’ny Federasiona iraisam-pirenena momba ny baolina kitra nanome rariny ny “Fosa Juniors” ary nilaza fa tsy ara-dalàna indray ny fifindran’i Dax avy tao amin’ny Fosa Juniors FC nankany amin’ny Kaizer Chiefs.
Vokany, samy nahazo sazy na i Dax na ny Kaizer Chiefs. Ho an’ny Ekipa Kazier Chiefs manokana, tsy mahazo mividy mpilalao mandritra ny 2 taona ity farany, raha toa ka voasazy handoa lamandy mitentina 157.572.000 Ariary sy tsy mahazo milalao baolina mandritra ny efa-bolana kosa i Dax. Na eo aza nefa ireo dia mbola manana 21 andro hampiakarana ny raharaha ny roa tonta ary aorian’ izay vao tena resy tanteraka.
“Hajaiko ny fanapahan-kevitry ny Fifa…”
Taorian’ity filatsahan’ny didy avy amin’ny Fifa ity dia naneho ny heviny tao amin’ny pejy fesibokiny avy hatrany ity mpilalao ity ary nilaza fa : “Hajaiko ny fanapahan-kevitry ny FIFA.” Momba ny Barea kosa indray dia nambarany fa efa nisy fifampiresahana teo aminy sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. « Efa fantatry ny mpanazatra Nicolas Dupuis tsara daholo ny momba an’io dosie io ka noho izany dia tsy ho afaka hanao Barea ny tenako mandritra ny efa-bolana. Vonona ny hanefa adidy mandrakizay ho an’ny fireneko aho raha mbola misy ilaina ahy ao amin’ny ekipam-pirenena », hoy koa ny fanambàrany.
Nahazo rariny ve ny Fosa Junior ?
Namoaka fanambaràna tao amin’ny pejy fesibokiny koa ny klioba Fosa Junior omaly hariva ary nilaza fa : “Manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny FIFA momba ny fifindrana izay eritreretinay tsy ara-dalàna nataon’i Dax, ny Fosa Juniors FC dia manaiky ity fanapahan-kevitra manan-tantara ity ary afa-po satria ny marina no nandresy. Manantena izahay fa tsy hisy intsony fifindrana tsy ara-dalàna tsy ho voasazin’ny lalàna mifehy izany.
Ity fandresen’ny Fosa Juniors ity dia fandresena ihany koa ho an’ny klioba rehetra eto Madagasikara sy ho an’ny Kitra Malagasy.” Raha ny lalàna mifehy ny kitra aloha, dia azo lazaina fa rariny ihany ny an’ny “Fosa Junior” satria misy dingana tokony harahina avokoa ny fifindrana klioba indrindra fa miampita avy ivelany. Na eo aza nefa izany, tsy tokony ho tia kely ny mpitantana klioba ka rehefa mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny zandry kely tahaka an’i Dax dia henjanina ny tady mamatotra azy. Nahoana tokoa moa ny Fosa Juniors sy Dax no tsy nifampiraharaha nandaminana izao toe-draharaha izao ?